အင်တာဗျူးကဏ္ဌ | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Category Archives: အင်တာဗျူးကဏ္ဌ
Rohingyas, the Victims of Sustained Genocidal Persecution for Nearly 40 Years July 27, 2015 ENGLISH, အင်တာဗျူးကဏ္ဌ, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် Amine Tuna Ertürk – İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (Turkey) Interview with Dr Maung Zarni Grave atrocities Rohingya people are facing in Myanmar, also known as Burma, is alarming. The Rohingya people numbering 1,3 million isaMuslim minority living in the Arakan state in western Myanmar. Although they are living
Read More လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးအောင်ထူး – ဖက်ဒရယ် ဥပဒေအကယ်ဒမီ အကြောင်း ဒီဗွီဘီ အင်တာဗျူး May 26, 2015 အင်တာဗျူးကဏ္ဌ, အထွေထွေသတင်း ကချင်ပြည်နယ် မိုင်ဂျာယန်ခရိုင် မိုင်ဂျာယန်မြို့မှာ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ အကယ်ဒမီက တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကို သင်တန်းသားသစ်တွေ ခေါ်ယူ နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား လူငယ်တွေဟာ အနာဂတ်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ အခြားဥပဒေများ ရေးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ လူထုရဲ့ကိုယ်စား၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုယ်စားအနေနဲ့ တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိအောင် ပြုစုပျိုးထောင်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ အကယ်ဒမီရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီး လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးအောင်ထူးက ပြောပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရသွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ ဖက်ဒရယ်လို့ ဝေါဟာရအရ လက်ခံလာပေမယ့် အနှစ်သာရအရတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အောက်ကနေ ပြီးတော့ အင်မတန်မှ တင်းကြပ်တဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို တောက်လျောက် ကျင့်သုံးသွားမယ့် တပြည်ထောင်စနစ်ကိုသာ သွားမယ့်လမ်းကြောင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ သူက ဝေဖန်ပါတယ်။ . ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်ထူးကို
Read More Interview: A reluctant hero of the Rohingya in Myanmar April 9, 2015 ENGLISH, အင်တာဗျူးကဏ္ဌ, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် By Kristin Hulaas Sunde, London 8 April 2015 Amnesty supporters worldwide wrote letters supporting U Kyaw Hla Aung in prison in Myanmar. This 75-year-old lawyer from the persecuted Rohingya minority has been jailed repeatedly for his peaceful political work. After being released last October, he tells us what he is fighting for. Read More ပုဒ်မ (၅၉)(စ) သည် ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲခဲ့သော (၁၉၄၇) ခုနှစ် ခြေဥပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လိမ်လည်ဖြေဆို March 24, 2015 အင်တာဗျူးကဏ္ဌ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေးသတင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အာဏာရယူပြီး (၄) နှစ်နီးပါး ကြာမြင့်လာချိန် (၂၀၁၅) ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ဘီဘီစီ သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် ဂျိုနာဖစ်ရှာနှင့် ပြုလုပ်သည့် အင်တာဗျူးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ မဖြစ်ရေး တားဆီးနေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၍ လိမ်လည်ထည့်သွင်းဖြေဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ မဖြစ်စေရန် တားဆီးထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၅၉) (စ) နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေဆိုရာတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပုဒ်မ (၅၉) (စ) သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ အတည်ပြုခဲ့သော (၁၉၄၇) ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ပါရှိသော
Read More အနောက်တိုင်းရဲ့ ရှေ့နောက်မညီ ရှေ့ဖုံးနောက်ပေါ် မူဝါဒကို Professor Tariq Ramadan ထောက်ပြဝေဖန် January 17, 2015 အင်တာဗျူးကဏ္ဌ, ဥရောပ, နိုင်ငံတကာသတင်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ (England) အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် (Oxford University) အစ္စလာမ်ဘာသာရေးရာဌာန (Islamic Studies) ၌ ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ Professor Tariq Ramadan က “ပဲရစ်မြို့ (Paris) အကြမ်းဖက်မှုဟာ ဥရောပ (Europe) ရဲ့ အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်မှု၊ မုန်းတီးမှုတွေကို ပိုမိုတိုးပွါးလာနိုင်ဖွယ် ရှိတယ်”လို့ အလ်-ဂျာဇီယာ သတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူး အစီအစဉ်မှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယခုလို ပြင်သစ် Charlie Hebdo မဂ္ဂဇင်းတိုက်အပေါ် အကြမ်းဖက်မှုဟာ ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချရမှာ ဖြစ်သလို နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ လူသားအားလုံးကို တန်းတူ တန်ဖိုးထား တက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ “အီရတ် (Iraq) နဲ့ ဆီးရီးယား (Syria)